Igumbi lokulala eli-4 ePlaya Macenas elunxwemeni lokuphumla. - I-Airbnb
Igumbi lokulala eli-4 ePlaya Macenas elunxwemeni lokuphumla.
I-townhouse yonke sinombuki zindwendwe onguIgnacio
Indawo yokuhlala ibekwe kwindawo yabucala (Beach & resort Playa Macenas) enayo yonke into oyifunayo kwiholide ezolileyo ngaselwandle, ukufikelela ngokuthe ngqo kwiPlaya Macenas kwaye kufutshane nePaki yeNdalo yaseCabo de Gata.
I-complex inamadama okuqubha amabini kwaye enye yawo ibekwe kufutshane ne-terrace ephambili yendawo endihlala kuyo (ilungele iintsapho ezinabantwana).
I-Wifi, igaraji yabucala kunye nokhuseleko lweyure ezingama-24.
Izaphulelo zeveki (ubusuku obu-7) ngeenyanga ukusuka kuSeptemba ukuya kuJuni.
Indlu inamagumbi okulala ama-3 anebhedi yokumkanikazi kunye nestudiyo esinye esineebhedi ezimbini ezingatshatanga. Inamagumbi okuhlambela ayi-3 agcweleyo, enye yawo ikwi master bedroom.
Ikhitshi lixhotyiswe ngokupheleleyo kwaye livuleleke kwigumbi lokutyela elinetafile enkulu yabantu abasi-8.
I-terrace, esecaleni kwelinye lamachibi, ine-ambrela kunye netafile yokutya.
Ukufudukela kwabantu ezidolophini kunokufikelela ngokuthe ngqo kwiPlaya Macenas. Ukusuka kwibar ye-beach "El Manaca" unokufikelela kwii-cove ezimbini ezincinci apho ngokuqhelekileyo kungekho bantu. Enye yala ma-cove, "i-El Sombrerico" yayiyindawo yefilimu ethi "Treasure Island".
Ulwandle lwaseMójacar kunye nedolophu yimizuzu eyi-10-15 ngemoto kwaye inazo zonke iinkonzo eziyimfuneko (iivenkile ezinkulu, iivenkile zokutyela, njl.njl).
Indawo yokuhlala isondele kakhulu kwiPaki yeNdalo yaseCabo de Gata-Níjar.
IMojácar kunye neendawo eziyingqongileyo yeyona ndawo ifanelekileyo yokwenza izinto nosapho kunye nabahlobo. Uya kufumana uluhlu olubanzi lwemisebenzi yasemanzini (ukusefa emoyeni, ukuntywila emanzini, ukusefa ngokubhexa okanye ukukhwela isikhephe) ngokunjalo nokudlala igalufa. Kukwakho neendlela eziphawulweyo zokuhamba ngeenyawo eMojácar ngakumbi kwiPaki yeNdalo yaseCabo de Gata-Níjar.
Umbuki zindwendwe ngu- Ignacio
Emva kokuba ugcino luqinisekisiwe, uxwebhu luya kuthunyelwa kunye nazo zonke iingcebiso (imisebenzi kunye neendawo zokutyela) kufuphi nendawo yokulala. (Wamkelekile doc.).
Uya kuba nomntu onxibelelana naye ngayo yonke into onokuyidinga.
Inombolo yomthetho: VFT/AL/02307